Tuesday November 24, 2015 - 13:19:29 in Wararka by
Diyaaradda ay soo ridday dowladda Turkiya oo hawada ku gubanaysa.
Wararka ka imaanaya gobolka Xalab ayaa sheegaya in tobaneeyo katirsan maleeshiyaadka shiicada ah lagu dilay kadib dagaallo culus oo xoogaga kacdoonka iyo mujaahidiinta Jabhadda Al Nusrah ku qaadeen deegaano dhaca Koonfurta gobolka Xalab.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in meydadka maleeshiyaad shiico ah oo kasoo duulay wadanka Ciraaq lagu arkay goobihii lagu dagaalamay,dukumiintiyo ay baahisay jamaacada Jihaadiga Jabhadda Al Nusrah ayaa muujinayay maleeshiyaad Ciraaqiyiin ah oo daadsan saaxada dagaalka.
Dukumiintiyada waxaa ku cad in maleeshiyaadkan ay iiraan kasoo daad gurraysay Ciraaq si ay ula dagaalamaan dadka muslimiinta sunniga ah.
Dhinaca kale diyaarad dagaal oo laga leeyahay wadanka Ruushka ayaa lagusoo riday xad beenaadka ay wadaagaan Suuriya iyo Turkiya.
Warbaahinta maxalliga Turkiya ayaa sheegtay in diyaarad dagaal ay kusoo xad gudubtay Hawada Turkiya kadibna ciidanka difaaca cirka ay dhulka soo dhigeen,wararka ayaa intaasi ku daraya in diyaarad nuuceedu yahay F16 oo dowladda Turkiya ay leedahay ay dhulka soo dhigtay diyaaradda oo ay laheyd xukuumadda Ruushka.
Taliska ciidanka Turkiya wuxuu sheegtay in diyaaradda nuuceedu ahaa suukhe24 ay laba mar digniino siiyeen in ay ka baxdo hawada Suuriya balse duuliyaasha ayaa diiday amarka kaga imaanayay ciidanka Turkiga.
Sawirro lagu baahiyay baraha Internetka waxaa kasoo muuqanayay meydadka labadii duuliyay ee Russian-ka ahaa kuwaasi oo ku dhacay meel ku dhaw degmada Alkasab ee gobolka laadiqiya.
Kooxaha mucaaradka suuriya ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen mid kamida meydadka duuliyaasha Ruushka,war rasmi ah oo kasoo baxay wasaaradda difaaca Ruushka ayaa lagu sheegay in soo rididda diyaaradda Ruushka ee Turkiya ay dhalin doonto jiha wareer.
Ciidanka Nidaamka Suuriya iyo maleeshiyaad shiica ah ayaa dagaal culus uga jira mandiqadda Jabal Turkumaan ee gobolka Laadiqiyah kaasi oo kaabiga ku haya xad beenaadka.